Iindawo ezizodwa, iEuropea kunye neDesika yeCIS ... | Law & More B.V.
I-Eurasia ligama lendawo ebonisa ukuba yindawo yokuhlala iYurophu neAsia. Sidibanisa ulwazi lwezi ntengiso nobungcali bethu kumasebe amaDatshi ahlukileyo nakwamanye amazwe. Ngale nkqubo idibeneyo sinakho ukubonelela ngenkonzo epheleleyo kumashishini ase-Yuria nabantu abathile.
Njengeshishini elisebenza ngaphakathi kweli candelo, unokuza kuzo zonke iintlobo zemicimbi yezomthetho enzima. Emva kwayo yonke loo nto, la macandelo akakaze ame ngxi, ayasebenza. Amagqwetha ethu ziingcali kula macandelo anokuwela kuwo kwaye anokubonelela ngeshishini lakho ngeengcebiso zomthetho okanye ngoncedo, umzekelo kuxanduva lwemveliso.
Nangona impikiswano ibangela ukuba iimvakalelo zihambele phezulu, nesiphumo sokuba omabini amaqela angasiboni sisombululo, at Law & More sikholelwa ekubeni isisombululo esidibeneyo esanelisa onke amaqela abandakanyekayo sinokufumaneka ngokulamla. Kule nkqubo i Law & More abalamli abahoyi kuphela ngezinto abanomdla kuzo bobabini amaqela ngexesha lokubonisana, kodwa baqinisekisa noncedo lwasemthethweni nolweemvakalelo.